विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई स्वदेश फर्काउँदै ओली सरकार
Homeराष्ट्रिय खबरविदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई स्वदेश फर्काउँदै ओली सरकार
काठमाडौँ । सरकरले विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञानलाई स्वदेश फर्काउने प्रयास थालेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई स्वदेश फर्काउन लागेको हो । उनीहरुलाई स्वदेश मै प्रयोग गराएर मुलुकले लिएको समुद्ध नेपाल खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने लक्ष्यतर्फ सरकार अघि बढेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तगर्त स्थापना भएको ब्रेन गेन सेन्टरले विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान सीप स्वदेश भित्र्याउन आफ्नो सक्रीयता बढाएको छ ।
स्वदेशमा अवसर नभएको भन्दै युवापुस्ता विदेशिने क्रम नरोकिएका बेला उक्त प्रयासलाई आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
विदेशमा पढेर काम गरिरहेका विभिन्न पुस्ताले समेत स्वदेशका लागि काम गर्ने बाटो पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेपनि मुलुकबाट दैनिक १५ सयको हाराहारमिा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । सरकरी आँकडामा झण्डै ४३ लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् ।
कतिपय उच्च पदमा र विज्ञका रुपमा काम गरे पनि उनीहरु अवसर नहुने भन्दै नेपाल भित्रिन सकेका छैनन् । त्यसमा सरकारले उचित वातावरण नबनाएको गुनसो पनि छ ।
तर पछिल्लो समया सरकारले भने केही तदारुकता देखाएको छ । विदेशी ज्ञान र सीप देशको विकासमा खर्च गराउने माध्यमका रुपमा स्थापना भएको ब्रेन गेन सेन्टरमा आवद्ध केही नेपाली मूलका विदेशी विज्ञले भने स्वदेशमा काम थालिसकेका छन् ।
ब्रेन गेन इनिसियटिभका नाममा आवद्ध अमेरिकामा रहेका नेपाली समुहले स्वदेशमा काम थालेको हो । यसमा आवद्ध अधिकांश विज्ञ मन्त्रालयको ब्रेन गेन सेन्टरमा आवद्ध छन् ।
भविष्यमा ब्रेन गेन सेन्टरसँग जोडिएर कामलाई अघि बढाउने लक्ष्यसहित इनिसियटिभ्स गठन भएको विज्ञ डा. केशव भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गरी विज्ञले काम थालेका छन् ।
गुल्मी र गोरखामा थाल्यो काम
सुरुवाति चरणमा गुल्मी र गोरखाका विद्यालयमा विज्ञले काम थालेका छन् । यसपश्चात चितवन र गण्डकी क्षेत्रको जिल्लाका विद्यालय र सामुदायिक कृषि क्षेत्रमा काम थाल्ने विज्ञले तयारी गरेको जानकारी अमेरिकाबाट नेपाल आएका विज्ञ डा. सतिश देवकोटाको भनाई छ ।
हालैमात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको एक बृहत भेलामा विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञले आफ्नो सीप र ज्ञान नेपालमा प्रयोग गर्ने अवसरको खोजी विदशेमा बस्ने नेपालीले गरिरहेको बताएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नका लागि विदेश पलायन भएको मानवपूँजी नेपालमा फिर्ता गराउन आफूले भूमिका खेल्ने भन्दै फर्कन आह्रवान गरेका छन् ।
भेलामा सहभागि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको रुपान्तरण हुने गरी गरिन थालेको विकासका काममा सघाउन तयार रहेको बताएका थिए ।
विज्ञहरुले स्वास्थ्य, वातावरण, शहरी विकास, शिक्षा, कृषिक्षेत्र, जलस्रोत लगायत विविध क्षेत्रमा विदेशमा रहेका दक्ष मानव पूँजी परिचालन हुन सक्ने औँल्याएका छन् ।
नेपालका अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले, विमल कोइराला, डा. शंकर शर्मा, डा. सूर्यराज आचार्य लगायतले ब्रेन गेन सेन्टरलाई सबैको साझा धरोहरका रुपमा स्वायत्त निकायका रुपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
ब्रेन गेन सेन्टरमार्फत देशको आर्थिक विकासमा साझा सहमति गरेर अघि बढ्न सरकार र मन्त्रालयलाई विज्ञले सुझाव दिएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले विकासमा संलग्न विभिन्न निकायसँग विदेशी विज्ञलाई जोड्न पुलको रुपमा काम गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
आर्थिक स्रोतको तत्काल सरकार आफैले गर्ने र नपुगेका खण्डमा भविष्यमा खोजी गर्ने गरी ब्रेन गेनलाई अगाडि बढाईंदै छ । एनआरएनएलाई समेत सँगै लिएर अघि बढ्दा पाँच हजारभन्दा बढी विज्ञ तत्काल देशका लागि काम गर्न सेन्टरमा आवद्ध हुन सक्ने अनुमान छ ।
ब्रेन गेन सेन्टरमा आवद्ध विज्ञ परिचालन गर्न मन्त्रालयमा आएका सुझाव अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेलले बताए ।
माछाको लि लामी : २७६ किलोको टुना माछा, १८ लाख डलरमा वि क्याे
सरकारले सबैलाई काम दिने, कसैलाई भाेकै नराख्‍ने
काठमाडौं । सरकारले कसैलाई भोकै नराख्‍ने र सबैलाई काम दिने रणनीति लिएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएकाले कोही भोकै बस्न नपर्ने बताइन् । सरकारले रोजगारी, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले भनिन् […]
सरकारको सूचना कसले पुर्याउँछ भारतीय दूतावास ? मन्त्रीहरुको फोन ट्यापिङ गर्ने
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई गोपनीयता उल्लंघन गरे कानून लाग्ने भन्दै तर्साएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को जेठ ९ गते शुक्रबारको बैठकमा सरकारको गोपनीयता कायम गर्न नसकेको भन्दै उनी आ,क्रोशित थिए। सरकारका निर्णय कहाँ कहाँ पुग्छन् भन्नेबारे केही नबताए पनि उनको संकेत बैठक सकिनासाथ भारतीय दूतावासमा पुग्नेतर्फ लक्षित गरेका थिए। […]